Class Code : SFU-DHRMD-03-01 (Online)
SFU Professional Diploma in Human Resources Management and Development Online Course
SFU Professional Diploma in Human Resource Management and Development မှာဘာတွေလေ့လာသင်ကြားရမှာလဲ?
HR Professional တွေဟာ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ပြုမှုပုံတွေကို လေ့လာပြီး ဝန်ထမ်းတွေကို ဘယ်လို ဆွဲဆောင်မလဲ၊ ခန့်ထားမလဲ၊ ဘယ်လို ထိန်းထား မလဲ ဆိုတာတွေအပြင် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ မူဝါဒတွေ စည်းကမ်း တွေကို ဝန်ထမ်းတွေလိုက်နာအောင်၊ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေး တိုးတက်မှုရှိအောင် သင်တန်းပေးခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လစာနှင့် ဆုလာဒ်များချီးမြှင့်ခြင်း၊ ပဋိပက္ခဖြေရှင်းခြင်းနှင့် အလုပ်သမား သမဂ္ဂဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ အလုပ်သမား ဥပဒေဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တွေကို သိရှိလေ့လာရမှာဖြစ်ပါသည်။
စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ Manager များ (HR Manager, Operation Manager, General Manager)
လက်ရှိ Human Resource (HR) နှင့်ပတ်သတ်ပြီး လုပ်နေသူများ
Human Resource (HR) field ကိုဝင်ဖို့ စိတ်ကူးရှိသူများ၊ စိတ်ဝင်စားသူများ
SFU Professional Diploma in Human Resources Management and Development တွင်အဓိက ဘယ်လိုModule တွေသင်ကြားရမှာလဲ?
Module 1 - Human Resources Management
Module2- Organizational Development
Module4- Ethics & Contemporary in HRM
*ICM Human Resources Management/ Development Old Student - ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် (Save)